News | Desambra 2021
Vaovao, Wellness Ny Fizahana Pets Community, Company Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina News Fiaraha-Monina, Fahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fialam-Boly Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fiaraha-Monina Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina
Statistika ADHD 2021
Ankizy 6.1 tapitrisa eo ho eo no voan'ny ADHD any Etazonia, misy fiantraikany amin'ny zazalahy mihoatra ny zazavavy izany, ary miakatra ny statistikan'ny ADHD olon-dehibe. Mitadiava zava-misy ADHD bebe kokoa eto.
Manao ahoana ny fahasalamanao?
Inona ny fanjakana salama indrindra any Etazonia, ary iza amin'ireo no tsy salama? Jereo hoe aiza ny fanjakana misy anao manohitra ny fanjakana salama indrindra amin'ny 2019.
Ny tahirin-kevitra momba ny fanadihadianay dia mampiseho fitomboan'ny fitaintainanana raha ampitahaina amin'ny statistikan'ny fitaintainanana taloha. Ianaro ny fiantraikan'ny fanahiana amin'ny Amerikanina ankehitriny.
Manodidina ny 31% ny olon-dehibe no hiaina fanahiana amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany. Io no aretin-tsaina mahazatra indrindra any Etazonia. Jereo eto ny statistikan'ny fitaintainana bebe kokoa.
Kitapo fitsapana COVID-19 ao an-trano: Ny zavatra fantatsika
Nanome alalana kitapo fitsapana coronavirus 200 ny FDA - maromaro no azo ampiasaina ao an-trano. Ianaro ny fomba fampiasana fitsapana coronavirus ao an-trano ary ampitahao ny kitapo fanandramana eto.
Antontan'isa momba ny Autisme 2021
Ankizy 1 amin'ny 54 no manana autisme any Etazonia, ary maro amin'izy ireo no voamarina amin'ny faha-4 taonany. Nitombo ny antontan'isa momba ny autisme, saingy valan'aretina tokoa ve ny autisme?
Antontan'isa momba ny aretina Bipolar: 2.8% amin'ny mponina amerikana no manana aretina bipolar. Ny soritr'aretina matetika dia aseho amin'ny taona 25. Ny fihenan'ny androm-piainan'ny olona dia sivy taona.
Maherin'ny 7% ny olon-dehibe no ketraka, ary ny tanora 12-25 taona dia manana tahan'ny fahaketrahana avo indrindra. Jereo ny antontan'isa momba ny fahaketrahana amin'ny taona sy antony.
Antontan'isa diabeta 2021
11% amin'ny mponina amerikana no voan'ny diabeta - amerikana dia voan'ny diabeta isaky ny 17 segondra. Miakatra ny statistikan'ny diabeta. Ity no antony.
Ny fanadihadiana diabeta dia mampiseho soritr'aretina ambany kalitaon'ny fiainana amin'ny marary 1 amin'ny 5
Ny soritr'aretina diabeta dia mampihena ny kalitaon'ny fiainana amin'ny olona 1 amin'ny 5, ary 62% no miahiahy fa tandindomin-doza izy ireo noho ny COVID-19. Jereo ny valin'ny fanadihadiana sy statistika bebe kokoa.
Antontan'isa momba ny korontana mihinana 2021
Ny statistikan'ny fikorontanan'ny sakafo eran-tany dia nitombo hatramin'ny 3,4% ka hatramin'ny 7,8%. Efa ho 4% ny vehivavy adolantsento no manana aretina misakafo. Jereo eto ny zava-misy momba ny aretina.
Antontan'isa momba ny tsy fitrangana erectile 2021
Ny antontan'isa momba ny tsy fahasalamana erectile dia manambara fa ny ED amin'ny tovolahy dia tsy dia fahita firy fa mihabe. Fantaro ny fihanaky ny ED amin'ny taonany, ny hamafiny ary ny antony.
Nanaiky ny Biktarvy ny FDA amin'ny fampiasana ny regimens VIH
Biktarvy dia fomba vaovao, eken'ny alàlan'ny alàlan'ny VIH. Ireo akora ao aminy (bictegravir, emtricitabine, tenofovir alafenamide) dia manakana ny VIH tsy hitombo. Mianara bebe kokoa eto.
Manaiky safidy hafa mora vidy amin'ny EpiPen ny FDA
Ny fankatoavana ny Symjepi dia hampitombo ny fifaninanana tsena ary hampihena ny vidin'ny EpiPen. Mianara momba ny safidy EpiPen ary makà tapakila Symjepi maimaim-poana eto.
Nahazo fankatoavana avy amin'ny FDA ny generic glucagon
Ny olona voan'ny diabeta dia afaka manomboka manangona vola amin'ny tsindrona glukagon. Nankatoavan'ny FDA ny generika glukagon tamin'ny Desambra 2020, izay ho hita amin'ny fiandohan'ny 2021.
Nankatoavin'ny FDA ny jeneraly voalohany an'ny Proventil HFA
Ny US Food and Drug Administration (FDA) dia nanome fankatoavana an'i Cipla Limited hanamboatra ny generic Proventil HFA voalohany (albuterol sulfate).
Ny fankatoavan'ny FDA vao haingana dia misy zava-mahadomelina noho ny fiankinan-doha amin'ny opioid, migraines, MS
Nankatoavin'ny FDA i Lucemyra noho ny fitsaboana fiankinan-doha amin'ny opioid, i Gilenya ho toy ny fanafody sclerosis marobe, ary Aimovig ho toy ny fanafody migraine.
Manaiky ny Trijardy XR amin'ny diabeta karazana 2 i FDA
Ny Tridjardy XR dia fitambaran'ny fanafody diabeta 3 (metformin, linagliptin, empagliflozin). Ianaro eto ity zava-mahadomelina vaovao isan'andro ity.
Ny fomba fahatsapan'ny olona ny mikraoba - ary ialao
Ny mikraoba dia misy hatraiza hatraiza, fa ny sasany kosa mametraka olona ambony mihoatra ny hafa. Nanao fanadihadiana izahay mba hahalalana bebe kokoa ny tahotra ny mikraoba sy ny zavatra ataon'ny olona hisorohana azy ireo.
inona no ampiasaina amin'ny maloiloy mandritra ny fitondrana vohoka
inona ny pilina fanabeazana aizana mety amiko
Azoko atao ve ny mandray decongestant misy flonase
rahoviana ny zoloft no manomboka miasa amin'ny tebiteby
alpha blockers vs beta blockers noho ny tebiteby
ny fomba hanampiana hampiato ny kohaka amin'ny alina